देश डुब्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो, उदाहरण चाहियो भने विमानस्थमा गएर हेरे हुन्छ ! « News24 : Premium News Channel
देश डुब्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो, उदाहरण चाहियो भने विमानस्थमा गएर हेरे हुन्छ !
अर्काको देशको एयरर्पोट, बाटा, भवन, सुरुङ, रेल र समग्रमा सिस्टम देखेर आएका बाहरु, बच्चाहरुले झै लड्दैछन् । एउटै पार्टी भित्र बसेर, एउटै सिद्धान्त ओढेर, एउटै छत मुनी बसेर, एउटै झण्डा बोकेर । हो यस कारणले चाँही देश डुब्नै लाग्यो, लौन कोही बचाइदेउ ।